के भयो अभिनेत्री श्वेता खड्कालाई ? – List Khabar
Home / समाचार / के भयो अभिनेत्री श्वेता खड्कालाई ?
के भयो अभिनेत्री श्वेता खड्कालाई ?
admin January 18, 2022 समाचार Leaveacomment 76 Views
नेपालमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढेसँगै कलाकारहरु पनि यसको चपेटामा पर्न थालेका छन् । यसैक्रममा, अभिनेत्री तथा ‘विजनेश वुमन’ श्वेता खड्कालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । उनले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको माध्यमबाट आफ्नो रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जानकारी गराएकी हुन् । उनले सबैलाई सर्तक र सुरक्षित रहन आग्रह गरेकी छन् ।
फिल्म ‘कहाँ भेटिएला’ बाट अभिनय करिअर सुरु गरेकी श्वेताले ‘श्रीमान् श्रीमती, कोहिनूर, हाँसी देऊ एक फेर’ फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छन् । उनले तीन वर्ष अगाडि आफ्नै लगानीमा बनाएको फिल्म ‘कान्छी’ लिएर दर्शकमाझ आएकी थिइन् । उनी फेरि आफ्नै लगानीमा नयाँ फिल्म बनाउने तयारीमा छिन् । उनले निर्देशक यम थापाको एक फिल्म साइन गरेको पनि जानकारीमा छ ।
गत वर्षको मंसिरमा विजन्द्र सिंह रावतसँग दोस्रो विवाह गरेकी अभिनेत्री खड्काले विभिन्न व्यवसायहरुमा समेत हात हालेकी छन् । उनले हिमालयन जाभा (कफी सप) को राजधानीमा विभिन्न ठाउँमा आउटलेट खोलेकी छन् । महामारीकै समयमा उनले ‘अल्टिमोडल’ अनलाइन सपिङ पनि सञ्चालनमा ल्याएकी थिइन् । होटल, कन्स्ट्रक्सन लगायतको क्षेत्रमा पनि उनको लगानी छ । फाइल तस्विर
Previous क्यानडाबाट पठाएको मेलबाट चीनमा ओमिक्रोन प्रवेश गर्‍याे’
Next काठमाण्डौ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन सरकारले जारि गर्यो यस्तो सूचना (आदेश सहित)